Ciidamada xoogga oo howlgal ka wada agagaarka laanta buuro ee G/sh/hoose – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 11 July 2016
Taliska Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay wadaan howlgal ka dhan ah kooxda al-shabaab,kadib markii habeenimadii xalay ay weerareen saldhigga ciidamada Laanta Buuro oo dhaca G/Sh/hoose.
Sarkaal Magaciisa Qariyay ayaa Wakaaladda Wararka SONNA u xaqiijiyay in halkaasi ay gaareen ciidan Gurmad ah oo ka ruqaansaday magaalada muqdish, kuwaas oo baacsanaya maleeshiyadkii Xalay Soo Weeraray Laanta buuro.
Wali makala caddo qasaaraha ka dhashay weerarkii xalay iyo howlgalka milatari ee ay saakay qaadeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed
Weerarka Xalay ay Laanta Buuro ku qaadeen ayaa ku bilowday qarax uu fuliyay nun naftii halige ah sida SONNA uu xaqiijiyay Taliska Ciidanka Xoogga Dalka.
Banana bax lagu dhaleecaynayo qaraxii Madiina oo Muqdisho ka socda